Voavonjy amin’ny fahaveloman’i Kristy
"Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany, mainka ny hamonjena antsika amin’ny fahavelomany ankehitriny, rehefa nampihavanina."Romana 5:10
"Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tànana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika."Romana 8:34
Hatramin’ny nandraisako an’i Kristy teo amin’ny fiainako, dia ny epistily ho an’ny Romana no boky anisan’ny tiako indrindra ao amin’ny Baiboly. Namaky sy namerimberina namaky azy aho. Fa indray andro, dia nibahana tampoka tao an-tsaiko ny andininy ao amin’ny Romana 5:10, toy ny hoe mbola tsy novakiako mihitsy. Inona marina no tena dikan’ny teny hoe: «Voavonjy amin’ny fahavelomany?». Raha tao anatin’izay folo taona naha kristiana ahy izay aho no nanontanianareo ny fomba nahavoavonjy ahy, dia tsy ho nihambahamba namaly hoe: «Tamin’ny nahafatesan’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazofijaliana». Hatramin’io andro io, dia voamariko fa kristiana maro no mamaly toy izany koa: «Maty noho ny fahotako Jesosy, mba hahazoako toerana any an-danitra».
Fa raha misy manontany hoe: «Inona moa no hevitry ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty?», dia fanginana sy hagagana no matetika valiny ho azo. Indraindray, dia hisy hilaza fa ny nitsanganan’i Jesosy no nanaporofoana fa Izy no Zanak’Andriamanitra, ary marina izany (Romana 1:4)! Fa mba fantatra ve hoe ahoana no hahatonga izany fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty izany hihatra eo amin’ny fiainantsika isanandro? Io andininy ao amin’ny Romana 5 io dia manantitra fa afaka amin’ny ratsy isika, amin’ny fiainana andavanandro, ary voavonjy amin’ny fahaveloman’i Kristy ao anatintsika. Voavela heloka tokoa isika, satria maty ho antsika Izy; fa noho Izy nitsangana tamin’ny maty ary velona kosa no ahazoantsika miaina afaka sy sambatra. Novelomina tamin’ny fahavelomany isika, tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Koa mifamatotra amin’i Jesosy Kristy nitsangana tamin’ny maty ny fiainam-panahintsika. Mifandray aminy isika, miombona aminy, dia Izy Ilay Mpamonjy antsika, Ilay Sakaiza faratampony, Ilay Mpanolo-tsaina, Ilay mivavaka ho antsika.